युवाको ढुकढुकीमा गायक : सचिन | Emedia Hub UK
Home Entertainment युवाको ढुकढुकीमा गायक : सचिन
युवाको ढुकढुकीमा गायक : सचिन
गीत संगीको कुरा गर्नु बितिकै हामी मानवजातीलाई अर्कै अनुभवको अनुभुती हुन्छ । गीत संगीत मन नपराउँने व्याक्ति हुन्छ की हुँदैन यो ? एउटा प्रश्न मनले उत्पन्न गराउँछ । मनोरन्जनको आधार नै गीत र संगीतलाई लिने गरिन्छ ।
यो शताब्दीको संघारमा गीत संगीतको ठूलो भूमीका र पहुच रहेको पाइन्छ । गीत संगीतको परिभाष गर्ने कुनै शब्दकोषमा शब्दनै पाइन्दैन ।काठमाण्डौको बसाई अनी जीवनको दौडानमा संगीतको दुनियामा रम्ने हरेक आत्मीय मनहरुमा बस्न खोजिरहेका युवा गायक हुन् चर्चित सचिन राई ।
खोटाङ जिल्ला बुईपा १ कुसुङ्खा गाउमा २०४९ साल असार १० गते पिता शिव कुमार राई र माता शान्ता राईको कोखबाट जन्मिएका राई संगीतको दुनियामा निकै अगाडि आईसकेका छन् ।
खोजी प्रतिभा सिजन २ मा दोश्रो स्थान हासिल गरी बिगत ५ बर्ष देखी विभिन्न प्रतिस्र्पर्धात्मक कार्यक्रमबाट संगीत क्षेत्रमा क्रियाशिल राईको कुनै नौलो नाम होइन ।
सानै उमेरमा ठूलो उपलब्धी हातपार्न सफल राई सानैदेखी गीत अथवा गायनमा रुचि राख्ने गर्दथे । राईका हाल सम्म सिसि क्यामेरा, सानु, ईलाम फिक्कल, धेरै माया गर्छु, चर्चित गितहरु गाई सक्नु भएका राईको ३ दर्जन गीत बजारमा आईसकेका छन् ।
बिभिन्न गायनका कार्यक्रमहरुमा सामेल भएका राईले अहिलेसम्म ३ दर्जन गीत सानुू आधुनिक एल्बम पनि दर्सक सामु ल्याई सकेका छन् ।
उक्त एल्बम को गीत हरु पुरै छायाङ्कन भएको र सो गीतमा बिभिन्न कलाकार हरुले अभिनय गरेका छन ।
राई भन्छन ‘नेपाली संगीतलाई नै निरन्तर दिने उद्देश्य लिएर अगाडी बढिरहेको छु ।
आशा छ गायक सचिन राईले सफल्ताका शिखर अझै चुम्ने छन् ।
दयाहाङ र प्रियंकाले नसुनेकै होत फ्यानहरुको कुरा ?
राजपाले गर्यो चुनाव भाड्ने घोषणा, आमहड्तालसहित अनिश्चितकालिन बन्द